ကလေးတွေရဲ့ဒေါသကို ထိန်းကျောင်းနိုင်အောင် ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်း (7)ခု - Chit MayMay
Home Parenting Parent Guide ကလေးတွေရဲ့ဒေါသကို ထိန်းကျောင်းနိုင်အောင် ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်း (7)ခု
ကလေးတွေရဲ့ဒေါသကို ထိန်းကျောင်းနိုင်အောင် ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်း (7)ခု
ဒေါသက လူသားတို့ရဲ့ အဓိက စိတ်ခံစားချက်တွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ၊ တခါတရံမှာ ကလေးတွေဟာ ဒေါသကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ကလေးတွေရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းကျောင်းနိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်မယ့် နညးလမ်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါသကို ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် ဖော်ပြပါတယ်။ တစ်မျိုးက နှလုံးခုန်နှုန်း အရှိန်မြှင့်လာပြီး သွေးဖိအားနှင့် adrenaline ထုတ်လုပ်မှု တိုးလာခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်မျိုးက မျက်နှာအမူအရာတွေ၊ လေသံတွေ ပြောင်းလဲလာပြီး ကြွက်သားတွေ တင်းမာလာခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ကလေးတွေ ဒေါသဖြစ်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ အော်ဟစ်ခြင်း၊ အရာဝတ္တုတွေ ပစ်ထုတ်ခြင်း၊ ပစ်ပေါက်ခြင်း (သို့) စော်ကားခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သားသမီးတွေ ဒေါသနဲ့ ပြုမှုရင် မိဘတွေ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ? ဒါကို အဖြေပေးဖို့ ကြိုးစားကြည့်ရအောင်။
ကလေးတွေရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းညှိပေးမယ့် နည်းစနစ်
ဒေါသဆိုတာ ဘယ်သူ့အတွက်မဆို သာယာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်မဟုတ်ပေမယ့် အဲဒါကနေ အများကြီး သင်ယူနိုင်တာကြောင့် အဲဒါက မကောင်းဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကလေးတွေကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုခုနဲ့ ကြုံလာရတဲ့အခါ ကလေးတွေ ဒေါသဖြစ်တတ်ကြတာ သာမာန်ပါပဲ၊ သူတို့ခံစားရတာကို ပိုဆိုးသွားစေမှာ ဖြစ်တာကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အပြောအဆို (သို့) အပြုအမှုဖြင့် ထိုခံစားချက်ကို ပျက်ပြယ်အောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး။ မိဘတွေက ကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းကျောင်းနိုင်အောင် ကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဒေါသကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကူညီပေးခြင်း
ကလေးတစ်ဦးဟာ ဒေါသအမျက်ထွက်နေချိန်မှာ သူနဲ့စကားပြောဖို့ အရမ်းခက်ခဲတာကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး စကားပြောဖို့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပြီးမြောက်အောင် စောင့်ရပါမယ်။ သူတို့ဘာကြောင့် ဒီလိုတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသလဲ?၊ သူတို့ ဒေါသထွက်ပြီးရင် ဘယ်လိုခံစားရလဲ? လို့ မေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက ကလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို သတိပြုမိလာပြီး ဘာ့ကြောင့်ခံစားရလဲဆိုတာ သိလာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး အော်ငေါက်တာကို ရှောင်ပါ
မိဘတွေအနေနဲ့ စံနမူနာပြဖို့ လိုအပ်ပြီး ကလေးကို လှုပ်ယမ်းတာမျိုး၊ အော်ဟစ်တာမျိုး၊ တံခါးကို အရှိန်နဲ့ ပိတ်တာမျိုးဖြင့် ဒေါသမထွက်ပြသင့်ပါဘူး။ မေမေတို့မှာလည်း သည်းခံဖို့ မလွယ်တဲ့ အခြေအနေတွေရှိပေမယ့် စိတ်ခံစားချက်ကို ထိန်းတယ်ဆိုတဲ့ ဥပမာကို ပြသရပါမယ်။ ရန်လို၊ကြမ်းတမ်းတဲ့နည်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခြင်းဟာ ကလေးရဲ့ ဒေါသနဲ့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲမှုကို ပိုတိုးလာစေပါတယ်။
၃။ ကလေးကို ဒေါသကင်းစွာ ပြုမှုတတ်အောင် သင်ကြားပေးပါ
ရံဖန်ရံခါတွင် ကလေးတွေမှာ ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အရည်အချင်းမရှိတာကြောင့် ၊ နစ်မြှုပ်နေတဲ့ ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်လဲဆိုတာ မသိတာကြောင့် ဒေါသနဲ့ တုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကြောင့် သူတို့အား သင်ပေးရပါမယ်။
ဘယ်အရာက ဒေါသစိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ်ပါ
ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သူတို့ကို စကားပြောပါ။ ဒီပြုမှုနည်းက မသင့်တော်ဘူးဆိုတာ ရှင်းပြပါ။
နောင်ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေကြုံလာခဲ့ရင် အဖြေရှာတတ်ဖို့အတွက် သူတို့ကို ကူညီပေးပါ။
ကလေးက အခြေအနေတစ်ခုကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ တုံ့ပြန်တဲ့အခါ အားပေးထောက်ခံပါ။
၄။ တခြားလုပ်ဆောင်ချက်သို့ ပြောင်းပါ
ကလေးက ဒေါသခံစားချက်ကို စတင်ခံစားရတဲ့အခါ သူတို့အတွက် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ တခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့ ပြောင်းခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းဖြင့် သူတို့အား ထိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာအခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-
ပုံတွေ ကြည့်ရင်း ပုံပြင်တွေ ပြောပြပါ
မိသားစုနှင့်အတူ board game ကစားပါ
calm jar တစ်ခု ဖန်တီးပြီး သူတို့ ဒေါသထွက်တဲ့အခါ သုံးပါ
၅။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အခြေအနေကနေ ရုန်းထွက်ပါ
အောက်ပါအပြုအမူတွေနှင့်အတူ သင့်ကလေးအား ဒေါသထွက်နေတဲ့ အခြေအနေကနေ ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
ဖေဖေ ,မေမေနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ
ကလေး စိတ်လန်းသွားအောင် ငြိမ်သက်အေးချမ်းစေမယ့် နေရာတစ်ခု ရှာပေးပါ
၆။ စိတ်လျှော့ဖို့ သင်ကြားပေးပါ
ကလေးတွေရဲ့ ဖိအားတွေ ပြေပျောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတချို့ကို ကြည့်ကြရအောင်။
အားကစား။ အားကစားက စိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အင်ဒိုဖင်းတွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးတာကြောင့် ဒေါသနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာ အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အားကစားက ကလေးရဲ့ စွမ်းအင်အပိုတွေကို သုံးစွဲကြပါတယ်။
အပန်းဖြေခြင်း (သို့) အသက်ရှူနည်းစနစ်များ။ ကလေးတွေဟာ ဒီနည်းလမ်းတွေကို အချိန်မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူတို့ကို စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ယောဂ (သို့) သတိပဌာန်ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်မှုတွေက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၇။ သူတို့ရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းကျောင်းနိုင်အောင် စာနာနားလည်မှုကို အားပေးပါ
တခြားသူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပြီး တစ်ဖက်လူနေရာကနေ ဘယ်လိုခံစားပေးမလဲဆိုတာ သိနိုင်အောင် ကလေးတွေကို စာနာမှုသင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့က သူတို့အတွက် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်လို့ ဒီတန်ဖိုးကို ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ကလေးတွေဆီ ပေးပို့ရပါမယ်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် လူကြီးတွေတောင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ကလေးတွေဆိုရင် ပိုတောင်ခက်ခဲပါတယ်။ ကလေးက ငယ်လေလေ၊ ဒီစိတ်ခံစားချက်ကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ပိုခက်လေပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းနိုင်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းတွေက အရမ်းအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတိုင်းက အခြေအနေကို ဒေါသနဲ့ မတုံ့ပြန်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုလုပ်လာရင် ဒီစိတ်ခံစားချက်ကို စီမံခန့်ခွဲနည်း သင်ကြားပေးဖို့က မိဘတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မေတ္တာနဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းက အရာရာကို အောင်မြင်စေပါတယ်။
Previous articleသူတို့ကိုယ်ဝန်ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ဖက်ရှင်ကျကျထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သော အနုပညာရှင် (၁၆) ယောက်
Next articleမိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၉)မျိုး